Ny Finoan’ilay Manam-pahaizana Momba ny Taolana | Fanadinadinana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Pangasinan Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
FANADINADINANA | IRÈNE HOF LAURENCEAU
Miresaka ny Finoany Ilay Manam-pahaizana Momba ny Taolana
Dokotera mpandidy sady mpitsabo taolana i Irène Hof Laurenceau, any Soisa. Tsy tena nino izy taloha hoe misy Andriamanitra. Niaiky anefa izy tatỳ aoriana fa tena misy ny Mpamorona. Lasa nino an’Andriamanitra àry izy. Nanontany momba ny asany sy ny zavatra inoany ny Mifohaza!
Nahoana ianao no lasa liana tamin’ny siansa?
Mbola kely aho dia efa tia biby sy zavamaniry. Tany Richterswil izahay no nipetraka, tany akaikin’ilay farihy hoe Zurich. Matetika izahay mianakavy no niara-nitsangantsangana sady niresaka momba an’izay zavaboary hitanay teny.
Nahoana ianao no nianatra momba ny taolana?
Nisy fotoana i Dada niara-niasa kely tamin’ny mpandidy tao amin’ny hopitalin’ny tanànanay. Faly erỳ izy nitantara ny fandidiana natao tany. Lasa tiako koa ilay izy dia nianatra ho dokotera mpandidy aho. Ny fandidiana mifandray amin’ny taolana no nofidiko satria mahaliana ahy ilay izy. Mila mampiasa teknika toy ny injeniera mantsy ianao, mba hamerenana amin’ny laoniny an’izay taolana na hozatra tapaka, amin’izay ilay olona afaka mihetsika sy mandeha tsara indray.
Izany aloha eo ihany, fa faly be koa aho rehefa sitrana ny marary tsaboiko. Tiako ny mikarakara olona.
Fa naninona ianao no tsy tena nino hoe misy Andriamanitra?
Tamin’izaho mbola tanora ilay izy no nanomboka. Voalohany aloha, fantatro hoe kay ratsy fitondran-tena ny mpitondra fivavahana sasany. Dia tena tsy neken’ny saiko mihitsy ilay izy. Faharoa, nino ny evolisiona (na fiovana miandalana) ny mpampianatra siansa anay. Dia lasa nino koa aho, indrindra rehefa teny amin’ny oniversite.
Nahoana ianao no nanaiky ny evolisiona?
Satria aho natoky an’ireo mpampianatra anay. Nihevitra koa aho hoe matoa misy biby samy hafa karazana nefa misy itovizany, dia marina ilay hoe iray ihany ny razamben’ny zavamananaina rehetra. Noheveriko àry fa nivoatra miandalana tokoa ny biby, ary nanome karazam-biby hafa tatỳ aoriana satria niova ny fototarazony.
Inona anefa no nampiova hevitra anao?
Nisy namako nanasa ahy hanatrika ny fivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah. Sariaka be ry zareo, sady nahaliana ahy koa ny zavatra nohazavaina tany. Nitsidika ahy ny iray tamin-dry zareo, dia nanontaniako hoe: “Inona ny porofo fa tena marina ny Baiboly?”
Nasehony ahy tao amin’ny Baiboly ireo faminaniana tanteraka amin’izao fotoana izao. Anisan’izany ilay tenin’i Jesosy hoe hisy ady maneran-tany, sady hisy ‘horohoron-tany ary areti-mandringana sy mosary.’ * Nisy andininy hafa koa niresaka hoe hiharatsy ny fiainana, satria ho ratsy toetra sy ho tia vola ny olona. * Ary izany mihitsy no hitantsika izao. Nianatra Baiboly àry aho sady nazoto be. Hitako fa tanteraka foana izay lazain’izy io. Nandinika indray àry aho hoe ahoana tokoa no nampisy ny fiainana.
Nanampy anao hahita ny valin’izany ve ny asanao?
Ie. Nikaroka momba ny fandidiana lohalika aho, tamin’izaho vao nianatra Baiboly. Taloha kelin’ny 1970, no nanomboka azon’ny manam-pahaizana hoe manao ahoana marina ny ao anaty lohalika ao. Hitan’izy ireo fa tsy vitan’ny hoe mety mivonkina sy mitsotra fotsiny ny lohalika, fa mety mihodina koa sady mandroso sy mihemotra. Izany no mahatonga antsika ho afaka handeha sy handihy ary hanao fihetsika samihafa.
Niezaka naka tahaka ny lohalika ny mpikaroka, nandritra ny 40 taona teo ho eo izay, saingy tena sarotra be ilay izy. Nahavita solona lohalika ry zareo, nefa tsy tena mateza izy ireny. Na arifomba be aza ilay izy, dia 20 taona eo ho eo ihany dia simba. Tsy toy izany kosa ny tena lohalika satria misolo foana ny sela ao anatiny. Tsy tongatonga ho azy izany amiko fa nisy Andriamanitra tena mahay namorona azy.
Dia ahoana izany ilay hevitra nahatonga anao hino ny evolisiona?
Voalohany aloha, ilay hoe misy itovizany ny biby dia efa manaporofo fa iray ny Mpamorona azy. Faharoa, na dia mety hiova aza ny fototarazon’ny biby, dia tsy hanome karazam-biby tsara kokoa mihitsy. Tsy hoe mihatsara mantsy ilay fototarazo fa matetika aza no miharatsy. Ary na misy aza izany fiovana izany, dia tsy hanome zavatra tena miavaka sady voakaly tsara toy ny lohalika. Mainka moa izany fa taova hafa amin’ny vatan’olombelona!
Na misy miova aza ny fototarazo, dia tsy hiteraka zavatra voakaly tsara toy ny lohalika mihitsy
Tena nihatsara ny fiainako rehefa nampihatra ny toro lalan’ny Baiboly aho. Nanatrika fivoriambe iraisam-pirenena nataon’ny Vavolombelon’i Jehovah koa aho tamin’ny 2003. Hitako fa nifankatia be izy ireo, na dia mbola tsy nihaona mihitsy aza taloha. Tsy am-bava fotsiny ny an-dry zareo ny fitiavana. Mba te hiaina an’izany koa aho!
^ feh. 15 Lioka 21:10, 11.
^ feh. 15 2 Timoty 3:1-5.
Hizara Hizara Miresaka ny Finoany Ilay Manam-pahaizana Momba ny Taolana
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Afaka ny Hiaina Firy Taona Ianao?
Hizara Hizara MIFOHAZA! Afaka ny Hiaina Firy Taona Ianao?
MIFOHAZA! Afaka ny Hiaina Firy Taona Ianao?